पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला ! – Bihani Khabar
Home / Tech / पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला !
फेसबुक ह्याक भएपछि उनको अकाउन्टमा अनेकथरी पोस्टहरू आउन थाले। त्यो बेलासम्म पनि पुरानो सिमको याद थिएन। उनले फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गर्ने धेरै प्रयास गरिन्। तर, अकाउन्ट ह्याक गरेर अर्कैले चलाउन थालिसकेको हुनाले ब्लक गर्न सम्भव भएन। अकाउन्टमा अनेकथरी पोस्ट आउन थालेपछि प्यारामाउन्टका लिगल एड्भाइजर प्रविन सुवेदीलाई घटना सुनाइन्। वकिल सुवेदीले सो घटनालाई उजुरीको रूपमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकु पु¥याए।
उनलाई प्रहरीले फेसबुकमा सेक्युरिटीका लागि कुन मोबाइल नम्बर र इमेल अकाउन्ट राखेको छ भनेर सोधपुछ ग¥यो। फेसबुकमा प्रयोग गरेको एनसेल नम्बर सात महिना अगाडि नै फालिसकेको उनले प्रहरीलाई जानकारी गराइन्। लगत्तै प्रहरीले सोही नम्बरमा फोन गर्दा केटा मान्छेले फोन उठायो। प्रहरीले उसलाई तत्काल टेकुमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो। तर त्यो युवा टेकुमा उपस्थित भएन, बरु तुरुन्तै ह्याक गरेको फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गरिदियो।
‘फसेबुक अकाउन्ट ब्लक गरेपछि हामीले पनि त्यति चासो दिएनौं’ वकिल सुवेदीले भने, ‘हामीले प्रहरीमा थप प्रगति के भयो भनेर सोधेका पनि छैनौं।’ नेपालमा एउटा व्यक्तिले दुई वा सोभन्दा बढी सिम लिन्छन् र सेक्युरिटीको ख्याल नगरी सिमकार्ड मिल्काउँछन्। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने श्रेष्ठको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ।
सिमकार्ड केही पनि होइन भनेर ब्लक नगरी फ्याँकीदिँदा नै यस्ता समस्या आइपरेको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरणको नियमअनुसार नै सेवा प्रदायक कम्पनीले सिमकार्ड प्रयोग गर्न छाडेको ६ महिनापछि त्यो नम्बर अर्कालाई दिने गरेका हौं। ‘नम्बर अर्कालाई प्रदान गर्दा त्यो नम्बर कुन सामाजिक सञ्जलसँग जोडिएको छ भनेर हामीले हेर्न मिल्दैन। यसमा सेवाप्रदायकको केही समस्या पनि होला’, उनले भने, ‘त्यो भन्दा पनि समस्या ओटीटी (ओभर दी टप)ले गर्दा भएको हो। ओटीटी अर्थात फेसबुक, भाइबर, ट्विटरलगायत सञ्जाललाई निगरानीमा ल्याउन नसक्नुले पनि यस्ता समस्या देखा परेका हुन्।
‘अर्को एउटा प्रयोगकर्ताले कतिवटा सम्म सिमकार्ड किन्न पाउँछन् भनेर नतोकिनाले पनि यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्’, अधिकारिले भने, ‘नेपालमा जुन दिनबाट सय रुपैयाँमा सिमकार्ड पाउन थाल्यो त्योदिनबाट सिमको प्रयोगमा ठूलो संख्याले वृद्धि भएको छ। अहिले जनसंख्याभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोगको कारण पनि त्यहीँ हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा कुल जनसंख्याको १३५.५५ प्रतिशत मानिसमा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ। यसको प्रमुख कारण प्रयोगकर्तामा एउटा सिम किन्यो एक पटक प्रयोग ग¥यो अनि फालिदिने प्रचलन छ। तर, त्यसबाट हुन सक्ने दुर्घटनाबारे जानकारीको कमी छ उनीहरूमा। यो समस्याबारे हामीले प्राधिकरणमा जानकारी गराएका छौं।
Previous तीन वर्षपछि होली मनाइन् श्वेताले
Next फोरमसँग सहमति गर्ने प्रयास असफल, मन्त्रालय भागवण्डा मिलेन
ऋण काढेर विदेश पठाएको छोराको शव ल्याउन नपाउँदा परिवार तनावमा